Jose Mourinho oo tinta xiirtay isagoona sheegay inay….+SAWIR – Gool FM
Jose Mourinho oo tinta xiirtay isagoona sheegay inay….+SAWIR
Byare January 25, 2017
(Manchester) 25 Jan 2017. Mar uu Jose Mourinho la hadlayay saxaafadda ka hor kulanka habeen dambe ee semi-final ka EFL Cup ay la yeelan doonaan Hull City ayaa waxaa lagu arkayay qaab cusub uu tinta u soo xiirtay isagoona ku sheegay sababta inay tahay mudnaan gaar ah.
Jose Mourinho oo la waydiyay muuqaalkiisa cusub ayaa ku jawaabay:
“Waa mudnaan gaar ah maxaa yeelay waxaan ahay nuuca xariif ee sidaa sameyn kara, bil gudaheedna madax cusub sameysanaya, waa mudnana gaar ah oo aan sameyn karo.
Ma ahan markii ugu horreysay uu Jose sidan oo kale ugu kaftamo marka wax laga waydiiyo qaab jarniinkiisa cusub oo 2013-kii mar sidan oo kale uu tinta soo xiirtay wuxuu ku sheegay inuu diyaar u yahay dagaal.
Cristiano Ronaldo oo wadada uga tagay baabuurkiisa qaaliga ah kaddib markii uu wadi waayay!!!
GOOGOOSKA: Juventus vs AC Milan 2-1 (Juve oo Milan ka aarsatay)